Nei Kutakura Wheelchair Yakakurumbira muDurable Medical Equipment
Mumakore apfuura, pakange paine zvirango zvakati wandei zvine chekuita nezvekurapa zvishandiso zveiyo remara uye vakaremara. Parizvino, nekuda kwekodzero dzepamutemo dzakakura uye kunzwisisa kweiyo remara zvinodiwa nemunhu, iwe unogona kuwana yakasarudzika sarudzo yezvigadzirwa zviripo kufamba. Zvichida chinonyanya kutsvakwa uye chishandiso chinodiwa ndiyo chokufambisa wiricheya.
Kazhinji kwete magetsi emagetsi, ivo vanoitirwa zvikonzero izvo zvakati siyanei neyakajairwa mavhiripu. Akanyorwa pazasi pane mashoma mienzaniso uye zvinhu zviri kumashure kwekuwedzera mukurumbira.
Chikonzero chakakurumbira nei vashandisi vachisarudza kutenga chokufambisa wiricheya zvinopesana neyakajairika wiricheya ndeyekuti ivo vari nyore kwazvo kufamba navo. Ivo anonyanya kushandiswa kubatsira kutakura remara vanhu kubva kumba kuenda kukiriniki yechiremba, kumashopu ezvitoro, kana chero chero imwe nzvimbo iripo wiricheya kufambidzana.
Izvo zvinoitikawo kuva zvakanyanyisa kurema kana zvichienzaniswa neyakajairwa mavhiripu, uye kazhinji iine folding system inobvumira cheya kuti ikwane zviri nyore mumotokari.
Chimwe chikonzero chinoita chokufambisa wiricheya yakakurumbira yavo dhizaini dhizaini. Iyo wiricheya yakagadzirirwa kupa vashandisi mukana wakanakisa wekuikwana munzvimbo dzakatemerwa, ichivagonesa kutora iyo wiricheya chero kwavanoenda. Zvirokwazvo, pamwe nehuwandu hwekubuda kwatinoenda, kana kuchingova kumhanyira kumusika mukuru kana kushanyira guta rinotevera kana kunze kwenyika, hatigone kutarisira zvakapotomoka zvatingawana tiri.
senga mavhiripu anowanzo kuzivikanwa nemavhiri awo madiki. Kunyange zvakajairika mavhiripu vane mavhiri mahombe ekumashure kugonesa vashandisi kuvashandura kuti vatungamire uye kufambisa, kutakura mavhiripu vane mavhiri mashoma uye akaderera kumashure, saka kuda mumwe wekusundidzira iyo wiricheya. Nekuda kweichi dhizaini, kutakura mavhiripu zvidiki pamwero, izvo zvinoita kuti zviwedzere kusimba uye zvinoshanda kutendeuka munzvimbo diki.
Kunyangwe chigaro chiri chidiki kwazvo, hazvireve kuti hauna dzimwe sarudzo dzekuongorora. Webhu yakavakirwa pakurapa zvigadzirwa vatengesi vazhinji vanopa huwandu hwakawanda hwekutakura mavhiripu kutora kubva pakusanganisa mamodeli mune akasiyana saizi, maumbirwo, ruvara uye kugona.
A wiricheya Cushion Chishandiso Chinobatsira
Kunyange kutakura mavhiripu kazhinji inosanganisira machira kana zvigaro zvevinyl, kana uchizopedza maawa akati wandei uchigara pazviri, iwe ungangoda kuwana kumwe kutsigira kuti uwane zvigaro zvakanaka. Zvakafanana nemamwe mataera e mavhiripu, zvigaro zvekufambisa zvinopawo sarudzo dzemakusheni. Iyo padding inowanzo kuwanikwa muzvikamu zvitatu zvekutanga kuti upe akasiyana mabasa:
Positioning wiricheya Cushion inoratidzira dhizaini yakasetwa kumisikidza chiuno chemushandisi uye makumbo ezasi mune chaiyo mamiriro.
Comfort wiricheya Makushoni anowanzo gadzirwa kubva kugel kana furo kuti ape kunyaradzwa kwakanyanya kune iye munhu.
Kudzivirira wiricheya Cushion yakagadzirirwa kuderedza kumanikidza maronda. Iwo anogona kugadzirwa kubva kune chero gel kana mweya wakazara cushioning sezvo izvo zvishandiso iri mhando dzinoshanda kwazvo kudzikisira mikana yekukwesana uye kurega ganda kufema.
Kazhinji, iyo chokufambisa wiricheya inozivikanwa zvakanyanya kupihwa kuti vanobvumidza kufamba of wiricheya-vanhu vakagadziriswa munzvimbo dzeveruzhinji. Kunyangwe chiri chokwadi chakasimbiswa chinowanzoitika mavhiripu anogona mune dzimwe nguva kubata basa, kutakura mavhiripu zvinogadzirwa nezvinhu zvakasimba kuti zviite basa rayo uye kubatsira mune zvirinani kufamba uye chinja kubva pamotokari kuenda kunzvimbo dzekudyira, nzvimbo dzekutandarira, nzvimbo dzekutengesa nezvimwe.